နေ့ကုန်သွယ်ခြင်းကသင့်အားအမြင့်ဆုံးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ2ကုန်သွယ်ရေးဇန်နဝါရီလ 2022 လေ့လာပါ
နေ့ကုန်သွယ်မှုတွင်2ကုန်သွယ်ရေး 2021 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
နေ့ကုန်သွယ်မှုသည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှအမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်အတွက်ငွေကြေး၊ စတော့အိတ်သို့မဟုတ်ကုန်စည်များကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်မူလပေးဆောင်ထားတာထက်ပိုပြီးရောင်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်နေ့ကုန်သွယ်မှု၏ကျယ်ပြန့်သောအယူအဆမှာတစ်နေ့ထက်ပိုပြီးပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ဘယ်တော့မျှမကိုင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကုန်သည်များသည်နာရီပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်မိနစ်ပိုင်းများတွင်ပင်အနေအထားကိုဖွင့်ထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းသည်စျေးနှုန်းငယ်ခြင်း / လျှော့ချခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ များသောအားဖြင့်သြဇာ၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရှုပ်ထွေး? မဖြစ်စေပါနှင့် - နေ့ကုန်သွယ်မှုတွင်လေ့လာခြင်း2Trade 2021 လမ်းညွှန်၌ရှိသကဲ့သို့, သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းကိုအပြည့်အဝဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင်၏တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးအလုပ်ကိုလက်ျာခြေထောက်ပေါ်မှဖယ်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ လေ့လာသူအများစုကုန်သည်များသည်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးနေရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်ကြလို့ပါ။ အထူးသဖြင့်သင့်လျော်တဲ့အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာတွေတပ်ဆင်တဲ့အခါမှာပါ။
ယင်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်, နေ့ကုန်သွယ်တစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်နေ့ချင်းညချင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရခဲသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်မိနစ်နှင့်ချီ။ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တက်ကြွသော်လည်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွဲကိုင်ထားသည့်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ငွေချေးစာချုပ်များကဲ့သို့သောရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဆင်းမှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားနေသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှု၏ရေတိုသဘောသဘာဝအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အလွန်သေးငယ်သောအကျိုးအမြတ်များကိုပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုအရာများနှင့်အတူနေ့စဉ်ကုန်သည်များသည်နေ့စဉ်ရာနှင့်ချီသောရာနှင့်ချီသောကုန်သည်များကိုနေ့တိုင်းထားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းများသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက်အမြတ်အစွန်းများများရနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာတစ်နေ့လုံးကုန်သည်များ - ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံမသက်ဆိုင်ဘဲဆုံးရှုံးမှုများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းရဲ့သဘောသဘာဝပဲ။
သို့သော်ကြာမြင့်စွာနှင့်အောင်မြင်သောအရောင်းအ ၀ ယ်ကာလမှကုန်သွားသောသူများသည်ငွေကြေးဆုံးရှုံးခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသိကြသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဒီလေ့လာသူကုန်သည်တွေမကြာခဏကျရှုံးဘယ်မှာဒီဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ယနေ့ကုန်သွယ်ရေးနိုင်ရန်အတွက်, သင်တစ် ဦး စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်အွန်လိုင်းပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ထောင်နှင့်ချီသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ရေနံ၊ ရွှေ၊ စတော့အိတ်များ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊
သင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်၎င်း၏လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်တန်ဖိုးတက်သွားမည်လားသို့မဟုတ်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်မြင်သည်ကိုခန့်မှန်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတွက်ချက်လျှင်သင်ငွေရှာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်လျှင်၊ သင်ငွေရှုံးသည်။ တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးနေရာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပြုလုပ်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များစွာကြောင့်သင် ရ အခြေခံကျသောသတင်းများကိုအနက်ဖွင့်ရန်ဇယားများကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားရန်။
နေ့ကုန်သွယ်မှုကိုနားလည်ခြင်း - အခြေခံ
သင်အမှုအရာပတ်ပတ်လည်သင်၏ ဦး ခေါင်းရတခါနေ့ကကုန်သွယ်မှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အခိုးအငွေ့ကိုရှင်းထုတ်ရန်သင့်ငွေနှင့်မခွဲခွာမီသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
Buy️ရောင်း (ဝယ်) vs ရောင်း (အတို)
အကယ်၍ သင်ယခင်ကသမားရိုးကျ stockbroker ကိုအသုံးပြုဖူးတယ်ဆိုလျှင်အစုရှယ်ယာများ ၀ ယ်သည့်အခါသင်ရွေးစရာတစ်ခုတည်းနှင့်ရွေးစရာတစ်ခုရှိကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အခြေခံကုမ္ပဏီ၏စျေးနှုန်းကိုသာမှန်းဆနိုင်သည် up။ တစ်နည်းပြောရရင် IBM, Ford Motors, ဒါမှမဟုတ် Microsoft မှာရှယ်ယာတွေ ၀ ယ်မသွားဘူးဆိုရင်ကုမ္ပဏီကတန်ဖိုးကျသွားမယ်လို့ထင်ရင်၊
သို့သော်နေ့သည်ကုန်သွယ်မှုသည်ထူးခြားသောနေရာဖြစ်သည်၊ သင်သည် 'တိုတို' သွားရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့မဟုတ်) ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုအပေါ်စျေးနှုန်းကျဆင်းနေသည်ဟုခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော်ရေနံတန်ဖိုးသည်လာမည့်နာရီများအတွင်းကျသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သည်ဟုဆိုပါစို့။
ရောင်းရန်အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ဖြင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် ၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းမှုသည်အမြတ် ၇၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ နေ့အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါသင်သည်ရှည်စွာသွားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တက်နေသောပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး၏တန်ဖိုးကိုသင်မှန်းဆနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဟာ '၀ ယ်ယူ' အမှာစာချထားဖို့လိုတယ်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့ကုန်သွယ်မှု၏အချိန်ကာလကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စတော့ရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်မတည်ငြိမ်သောလှိုင်းများကိုထုတ်လွှတ်စေသည်။
သို့သော်နေ့အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာကိုနေရာအတော်များများအထိပွင့်လင်းစွာထားရှိလေ့ရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာနေ့ကုန်သည်တစ် ဦး သည်နေ့ချင်းညချင်းပွင့်လင်းသောအနေအထားကိုထားရှိခြင်းသည်အလွန်ထူးခြားသည်။
အထက်ဖော်ပြပါကဏ္ from မှ ဦး ဆောင်ပြီးတစ်ရက်ထက်နည်းသောရာထူးကိုကိုင်ထားသည့်အခါအမြတ်အစွန်းမှာနည်းသွားသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မတည်ငြိမ်မှုများပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်သောကြောင့်ဤသည်အထူးသဖြင့် NYSE - စာရင်းစတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်း, ရွှေ, ရေနံသို့မဟုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သောအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းကုန်သွယ်သည့်အခါအထူးသဖြင့်အမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာကုန်သည်တစ် ဦး သည် S&P 500 အညွှန်းကိန်းတွင် ၀ ယ်ရန်အမှာစာဝယ်သည်ဆိုပါစို့။ တစ်နေ့တည်းမှာအညွှန်းကိန်းကဘယ်လောက်ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်သလဲ။ စံအခြေအနေများအရ၊ စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲသည် ၀.၅ မှ ၂% အထိရှိသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်တစ်နေ့နေ့ကုန်သည်များသည်တစ်နေ့လျှင်ကုန်သွယ်မှုဒါဇင်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်။ ဤအချက်သည်အလွန်သေးငယ်သောအမြတ်အစွန်းရည်မှန်းချက်များအတွက်သာမကကုန်သွယ်မှုအမြောက်အမြားသည်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်နှင့်အမျှနေ့ကုန်သည်များသည်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ရေးအတွက်သြဇာကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
တစ်နေ့ကုန်သွယ်သောအခါရရှိနိုင်သည့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာအရေအတွက်သည်ဖြစ်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော။ ဤသည်နေ့ရက်ကုန်သည်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပစ်မှတ်ထားရန်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောပိုင်ဆိုင်မှုများရှိသည်။
ရှယ်ယာများ စတော့အိတ်ချိန်း မတည်ငြိမ်မှုများသည် S&P 500 ကဲ့သို့သောပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအညွှန်းကိန်းများထက်များသောအားဖြင့်နေ့ကုန်သည်များအတွက်အကျိုးအမြတ်အများဆုံးဖြစ်သည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်သင့်အား NYSE, NASDAQ, LSE နှင့် TSE ကဲ့သို့သောအဓိကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်များသို့ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ကိုပေးလိမ့်မည်။ အချို့ကစင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျအခြေစိုက်စျေးကွက်များကဲ့သို့အရည်အချင်းမပြည့်မီသောစျေးကွက်များကိုလည်းကျင်းပလိမ့်မည်။
Indicator: စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများကသင့်အားကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်များကိုကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ FTSE 100 ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းအားဖြင့်၊ ဗြိတိန်၌အကြီးအကျယ်စာရင်းပြုထားသည့်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ၏အနာဂတ်လမ်းညွှန်ကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အခြားဥပမာများမှာ Dow Jones နှင့် NASDAQ 100 တို့ဖြစ်သည်။
ကုန်စည်: တစ်ဖန်ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုသည်ဝါရင့်နေ့ကုန်သည်များနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းတွင်ရွှေ၊ ငွေ၊ သတ္တု၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဲ့သို့သောစွမ်းအင်နှင့်ဂျုံနှင့်ပြောင်းကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ ကုန်စည်ဈေးကွက်သည် ၂၄/၇ နေ့လည်လည်ပတ်နေပြီး၊
ETF များ အိတ်ချိန်းရောင်းဝယ်မှုရန်ပုံငွေများ (ETFs) သည်သင့်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုမယူပဲပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုတစ်ခုကိုခန့်မှန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ် ဦး ၏တန်ဖိုးအဖြစ် ETF သူတို့ဟာတစ်နေ့တာကုန်သည်တွေနဲ့အလွန်အမင်းရေပန်းစားနေတယ်ဆိုတာကိုဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဒုတိယနဲ့အတူတက်သွားမှာပါ။
Forex: နေ့စဉ် Forex လုပ်ငန်းသည်ဒေါ်လာ ၅ ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိသောငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုများကိုနေ့တိုင်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကူညီသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောကုန်သည်များသည် Forex ကိုအထူးပြုသည်။ စျေးကွက်များသည်မရပ်မနားလည်ပတ်နေပြီးငွေဖြစ်လွယ်မှုသည်ပြneverနာမဟုတ်ပါ။
Cryptocurrencies- Bitcoin နှင့်တူ Cryptocurrencies Ethereum ယခုအခါဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာသောနယ်ပယ်တွင်လည်ပတ်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ယခုအမေရိကန်ဒေါ်လာဆန့်ကျင်လူကြိုက်များဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရောင်းနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုပါ၊ cryptocurrencies သည်အလွန်မတည်ငြိမ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်စွန့်စားမှုမြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်ရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
တစ်ဖက်တွင်ကုန်သည်များသည်ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်မှာမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကုန်သည်များအားလုံးတွင်အထူးပြုရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနယ်ပယ်ထက်ကျော်လွန်သည် ပိုင်ဆိုင်မှု အတန်းများ။ ဆန့်ကျင်တွင်, အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များများသောအားဖြင့်တစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး ကိုဆင်း niche လိမ့်မယ်။
ဤသည်ကိုသင်ကလေ့လာသူကုန်သည်အဖြစ်မှတ်မိရန်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်တစ်နေ့တွင်သင်သည်ရေနံရောင်းဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် S&P 500 နှင့်ပြီးနောက်၎င်းသည် cryptocurrencies သို့ကူးပြောင်းသွားသည်ဟုဆိုပါစို့။ ကိစ္စတော်တော်များများမှာတော့ဒီဟာကဆိုးဝါးတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုပဲ။ မင်းဟာကုန်သွယ်ရေးအားလုံးမှာအဆင်မပြေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဘဏ္USDာရေးတစ်ခုတည်းအတွက် GBP / USD ကဲ့သို့သော Forex သို့မဟုတ်ရေနံစိမ်းကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ခြင်းသည်မည်မျှထိရောက်မည်နည်း။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်၏အချိန်ကုန်သမျှကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောတူရိယာ၏အဝင်များနှင့်အပြင်များကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်းနှင့်စျေးကွက်များသွားမည့်လမ်းကိုခိုင်မာသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချနိုင်သည်။
နေ့ကုန်သွယ်မှု၏ Real-World ဥပမာ
ဒီတော့တစ်နေ့တာကုန်သွယ်မှုရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုသိပြီဆိုရင်၊ ငါတို့ကတကယ့်ကမ္ဘာပုံနမူနာကိုကြည့်ကြမယ်။ ရိုးရှင်းစွာထားရန်၊ နေ့ကုန်သွယ်မှုသည်လက်တွေ့တွင်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း၏အခြေခံမူများကိုသင်နားလည်စေရန်အခြေခံကျသောကိန်းဂဏန်းများကိုအသုံးပြုမည်။
သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနအရ Facebook စတော့စျေးနှုန်းသည်လာမည့်နာရီများအတွင်းမြင့်တက်လာမည်ဟုသင်ထင်မြင်သည်
ထို့ကြောင့်စျေးကွက်ပေါက်စျေးဒေါ်လာ ၁၂၉.၀၀ ဖြင့်သင်“ ၀ ယ်ယူ” အမှာစာကိုသင်ရောင်းပါ
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဈေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၁၃၀.၂၉ အထိတိုးလာသည်
ဤသည် 1% ၏တိုးကိုယ်စားပြု
အစုရှယ်ယာ ၅၀၀ တွင်သင်၏စုစုပေါင်းအမြတ်မှာ ၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ဆို့ရန်သင်“ ရောင်း” အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိုက်သည်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတစ်ရက်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်ရေတိုအမြတ်အစွန်း ၁% ဖြင့်အလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ ထိုအရာကိုရှုထောင့်သို့တင်ပြရန်အဓိကအမေရိကန်ဘဏ်အများစုသည်အတိုး ၀.၁% သာပေးဆောင်ကြသည် တစ်နှစ်လျှင်!
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီတွင်ဖုံးအုပ်ထားသည့်အတိုင်းကုန်သည်တစ် ဦး သည်သြဇာကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ အထက်ဖော်ပြပါကုန်သွယ်မှုကို ၁၀ ဆမြှောက်ပေးလျှင်ကုန်သည်၏အမြတ်သည် ၅ ဒေါ်လာမှ ၅၀ အထိတိုးလာလိမ့်မည်။
သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနအရ Ford Motors ၏စတော့ရှယ်ယာများ၏စျေးနှုန်းသည်လာမည့်နာရီများအတွင်းကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်မြင်သည်
ထို့ကြောင့်စျေးကွက်ပေါက်စျေးအတိုင်းဒေါ်လာ ၅.၅၀ ဖြင့် 'sell' မှာထားမည်
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Ford Motors သည်ဒေါ်လာ ၅.၃၀ သို့ကျသွားသည်
သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ဆို့ရန်သင်“ ၀ ယ်” အမှာစာအားဖြင့်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုပိတ်သည်
အထက်ပါဥပမာသည်တစ်ရက်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်တိုတောင်းသောအမှာစာကိုမည်သို့အောင်မြင်စွာမည်သို့မည်ပုံအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းပြသသည်။ သူတို့က 'ရောင်း' အမိန့်ကိုနေရာချခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ပြီး၊ '၀ ယ်ယူ' အမိန့်ကိုပိတ်ပြီးပိတ်ကြသည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ပေးခဲ့သောဥပမာများတွင်ကုန်သည်များသည်တစ်နေ့လျှင်တစ် ဦး ချင်းရောင်းဝယ်မှု ၂ ခုစီပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည်။ ပြန်လည်ရယူရန် - အကယ်၍ သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုကြာမြင့်စွာသွားလျှင်၊ သင်သည် ၀ ယ်ရန်အမိန့်ကို ထား၍ ဖွင့်ပြီးရောင်းရန်အမိန့်နှင့်ပိတ်သည်။ သငျသညျပိုင်ဆိုင်မှုတိုတောင်းလျှင်သင်ကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါ။
ဒီအယူအဆဟာမှန်ကန်နေတုန်းပဲ၊ နေ့စဉ်ကုန်သည်တွေတော့မရှိသလောက်ရှားတယ် ခဲပွင့်လင်းတဲ့အမိန့်ထားခဲ့ပါ။ ဤအရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်ထွက်ပေါက်အမှာစာများတပ်ဆင်ရန်ဆိုလိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင်နေ့ကုန်သည်များသည်အမှာစာကိုကိုယ်တိုင်ပိတ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေပြီးသူတို့၏စက်ကိရိယာတွင်နာရီပေါင်းများစွာထိုင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့်ကုန်သည်များကတစ်နေ့လုံးရောင်းသည့်အမှာစာအရေအတွက်ကိုသင်စဉ်းစားသည့်အခါဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်နေ့ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်ရေးအသစ်မပြုလုပ်မီ 'stop-loss order' နှင့် 'take-profit' အမိန့်နှစ်ခုလုံးကိုနေရာချလိမ့်မည်။
Stop️ Stop-Loss အော်ဒါများ
တစ်နေ့တာကုန်သွယ်သည့်အခါ Stop-loss အမိန့်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ သင့်အားစျေးကွက်များကသင့်အားငွေပမာဏအချို့ဖြင့်ဆန့်ကျင်နေသည့်အခါကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သင်က Bitcoin / USD ကိုဒေါ်လာ ၇၁၁၀ ဖြင့်ရှည်လျားစွာသွားလိုသည်ဟုဆိုပါစို့
သင်စျေးနှုန်းတက်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ပေမယ့်သင်ဟာသင့်ရဲ့ bankroll ကိုသင့်တော်တဲ့ stop-loss order ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကာကွယ်ချင်ပါတယ်
သင်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးမှာ ၂% ဖြစ်သည်
တနည်းအားဖြင့် Bitcoin / USD ၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးဒေါ်လာ ၇၁၁၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်အလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်
ဤသည် $ 142 တစ်စက်မှပမာဏသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ $ 6,968 မှာငါတို့ရပ်တန့် - ဆုံးရှုံးမှုအမိန့် set-up
အထက်ပါ stop-loss အမိန့်ကိုသင်ကျင့်သုံးပြီးပါက Bitcoin / USD သည် ၃%၊ ၃၀%၊ သို့မဟုတ် ၉၉% သို့ကျဆင်းသွားလျှင်အရေးမကြီးပါ။ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကို ၂% သာလျှော့ချနိုင်သည်။
မှတ်ချက် - Stop-loss order များသည်ဘယ်တော့မျှအာမခံချက် ၁၀၀% ဘယ်တော့မှအာမခံချက်မရှိပါ။ ဤအချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်အခြေအနေများတွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုရပ်တန့်မှုအမိန့်သည်အခြားကုန်သည်တစ် ဦး နှင့်လိုက်ဖက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟူသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒီအန္တရာယ်ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့သင်ဟာ 'အာမခံထားတဲ့' stop-loss order ကိုစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖော်ပြထားသော stop-loss စျေးနှုန်းဖြင့်ပိတ်ထားလိမ့်မည်။ ဤသည်သို့သော်, သင်အခကြေးငွေအတွက်အနည်းငယ်ပိုကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။
✔️ယူပါ - အမြတ်မှာယူမှု
ထို့ကြောင့်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုအလိုအလျောက်နည်းအောင်လျှော့ချရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပြီ ဖြစ်၍ သင်၏အမြတ်ရည်မှန်းချက်များကိုယခုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်သည်နေ့အရောင်းအဝယ်လောကတွင်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အစဉ်အမြဲစိတ်ထဲထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်အရှုံးကို ၂% အထိကန့်သတ်လိုသော်လည်းအမြတ်အစွန်း ၅% ကိုသင်ပစ်မှတ်ထားချင်လိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ဖြစ်စဉ်ကို stop-loss ကိုအမိန့်အဖြစ်အတိအကျတူညီသောလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပေမယ့်ပြောင်းပြန်၌တည်၏။
သင်သည် Bitcoin / USD သို့ ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၇၁၁၀ ဖြင့်နေရာချလိမ့်မည်
သင်၏ Stop-loss order ကို $ 6,968 သတ်မှတ်ပြီး၎င်းသည်အများဆုံးဆုံးရှုံးမှုကို ၂% ရှိသည်။
သင်ဤကုန်သွယ်မှုမှအကျိုးအမြတ် 5% ပစ်မှတ်ထားချင်တယ်
၎င်းကိုအောင်မြင်ရန် Bitcoin / USD ကိုဒေါ်လာ ၃၅၅ တိုးရန်လိုအပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ငါတို့ယူ - အမြတ်အမိန့်ကို $ 7,465 မှာ install
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရနေ့စဉ်ကုန်သည်များသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရလဒ်များကိုအလိုအလျောက်ဖော်ပြပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကိစ္စရပ်များအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်သွားပါကကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းကိုယူပြီးအမြတ်ထုတ်ရန်အမိန့်မှတဆင့်ပိတ်လိမ့်မည်။ အမှုအရာအစီအစဉ်ကိုမသွားဘူးဆိုရင် Stop-loss order သည်ကုန်သွယ်မှုကိုအရှုံးပေါ်စေလိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည်မှာကုန်သည်များသည်နေ့စဉ်အမှာစာများစွာပေးပို့နိုင်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ထိုအရာနှင့်အတူအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုအကွာအဝေးတွင်ရှိနေမည်ဆိုလျှင်အမြတ်အစွန်း (သို့) Stop-loss order သည်အစပျိုးမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီကိစ္စဖြစ်လျှင်နေ့ကုန်သည်သည်ကုန်ဆုံးချိန်ကိုကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုအဆုံးသတ်ရန် (သို့) တစ်ညတည်းဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုရွေးချယ်ပါကနေ့ချင်းညချင်းငွေကြေးအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။
တစ်နေ့တာကုန်သည်များသည်အမြတ်အစွန်းအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတန်ဖိုးထားရန်သင်ငွေအမြောက်အများလိုအပ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်တစ်နေ့လျှင် ၂% ဒေါ်လာလက်ကျန်ငွေကိုရရှိခြင်းသည်သင့်အားတစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၄ ဒေါ်လာသာကျလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနှင့်အချို့သောကုန်သည်များသည်သြဇာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
သတိမထားမိသောသူများအတွက်၊ သင်၏သြဇာသည်သင်၏အကောင့်၌ရှိသည့်ငွေထက်ပိုပြီးကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ဟာပွဲစားတစ်ယောက်ဆီကပိုက်ဆံချေးပြီးရင်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကိုတိုးလာတယ်။ သြစတြေးလျကိုသြဂုတ် ၂ မျိုး၊ ဥပမာ ၂x၊ ၃x၊ ၄x စသည်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။
သင်သည်တစ်စည်လျှင် ၂၉ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သောဆီကိုဝယ်လိုသည်
သင်၏ကုန်သွယ်မှုငွေစာရင်းတွင်သင့်တွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သာရှိသည်။ သင်နှင့်ပိုမိုကုန်သွယ်လိုသည်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင် 10x ၏သြဇာသက်ဆိုင်ပါသည်
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အကောင့်ထဲတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သာရှိသော်လည်းသင်၏ဝယ်ယူမှုမှာဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်သည်
ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆီသည် ၃% တိုးလာသည်
၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းမှဒေါ်လာ ၁၅၀ ဖြစ်သည်
အထက်ဖော်ပြပါဥပမာအရသင်သည်သင်၏ဒေါ်လာ ၅၀၀ လက်ကျန်၏ပုံမှန်အားဖြင့် ၃% ကိုလုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းမှာဒေါ်လာ ၁၅ သာဖြစ်သည်။ သင် မူတည်၍ 3x ၏သြဇာကို 500 အဖြစ်မြှောက်လျှင်သင်၏စုစုပေါင်းအမြတ်သည် $ 15 အထိတိုးသည်။
သို့သော်သြဇာသက်ရောက်သောကုန်သွယ်မှုသည်သင့်ကိုတူညီစွာထိခိုက်စေနိုင်သည် ဆုံးရှုံးမှု amplified နေကြသည်။
တစ်နေ့ကုန်သွယ်သည့်အခါသြဇာသက်ရောက်နိုင်ခြေ၏အန္တရာယ်ကိုနားလည်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်မာဂျင်စနစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ဦး စွာပထမ ဦး စွာရှင်းပြရန်လိုသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဥပမာအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ 5,000x ၏သြဇာကိုအသုံးပြုသည့်အခါဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နှင့်ကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သာရှိသည်။
ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေမှဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုသင်၏ margin အကောင့်ထဲသို့ထည့်ပါ။ Layman ၏စည်းကမ်းချက်များအရကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအားဖြင့်သင့်ကိုဆန့်ကျင်သွားပါကထိုငွေပမာဏသည်ပြန်အမ်းရန်မလိုသောသိုက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကို“ ဖျက်သိမ်း” လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ကုန်သွယ်ရေးကဘယ်လောက်ကျသင့်လဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကသင်ဘယ်လောက်အထိအသုံးချတယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ စျေးကွက်ကသင့်ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဆန့်ကျင်လျှင် 10x သို့သြဇာရှိပါကသင်သည်သင်၏အနားသတ်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 10x မှာမင်းကို 10% margin ပဲထားဖို့လိုတယ်။
နောက်ဥပမာတစ်ခုမှာ 5x leverage ကိုသုံးခဲ့တယ်လို့ပြောကြရအောင်။ ဤသည်မှာဒေါ်လာ ၅၀၀ လက်ကျန်ဖြင့်ဒေါ်လာ ၂,၅၀၀ ကုန်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာမူ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, 2,500% အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်သွားကြဖို့စျေးကွက်ဖြစ်လျှင်, ငါတို့ $ 500 အနားသတ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။
ဒါကအဓိကပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့လာတယ် ပျံ့နှံ့ နှင့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်။
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအရပြန့်ပွားခြင်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏“ ၀ ယ်ခြင်း” နှင့်“ ရောင်း” စျေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ပေါက်စျေး၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်တည်ရှိနေပြီးပွဲစားများသည်အမြဲတမ်းငွေရှာမည်ကိုအာမခံသည်။
ပြန့်ပွားမှုအကြားခြားနားချက်ကို 'pips'ဘယ်အချိန်မှာကုန်သွယ် Forex နှင့်' အချက်များ 'သည့်အခါ လောင်းကစားခြင်းပျံ့နှံ့။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်ပြန့်ပွားမှုကိုရာခိုင်နှုန်းအချိုးအစားဖြင့်သာအကဲဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အကြောင်းမှာယင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမည်မျှတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည်ကိုပင်သိရှိစေပြီး၊
ဒစ္စနေးစတော့ရှယ်ယာတွင် ၀ ယ်ယူရန်ဒေါ်လာ ၁၀၆.၀၀ ဖြစ်သည်
ဒစ္စနေးစတော့ရှယ်ယာများ၏ရောင်းဈေးမှာ ၁၀၆၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်
စျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားရာခိုင်နှုန်းကွာခြားချက် 0.47% ဖြစ်ပါတယ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ္စနေးစတော့ရှယ်ယာကို ၀ ယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၆.၅၀ ဒေါ်လာပေးရသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုဒေါ်လာ ၁၀၆.၀၀ ဖြင့်သာရောင်းနိုင်သည်
ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့, ငါတို့ပင်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ပဲ 0.47% တိုးရန်ဒစ္စနေး၏စျေးနှုန်းလိုအပ်ပါတယ်
အထက်ပါအချက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ချိန်တွင်ချက်ချင်းလက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပြန့်ပွားမှုသည်ချိုးဖောက်မှုအထိရောက်ရှိရန်အတွက်အမြတ်အနည်းငယ်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဒါကြောင့်သင်တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားကမ်းလှမ်းတဲ့အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုသာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ပြန့်ပွားမှုကျယ်ပြန့်လေလေ၊ သင်၏ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ်များကိုသာဖုံးအုပ်ရန်သင်ပိုမိုလိုအပ်လေလေဖြစ်သည်။
ပြန့်ပွား၏ထိပ်တွင်, သင် ခွန်အား ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်တွေလည်းပေးရမယ်။ ပွဲစားအတော်များများသည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်လုံးဝကိုအားမပေးသောကြောင့် '' အင်အား '' ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်ပျံ့နှံ့မှုသာဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှကောက်ခံပါကသင့်မှာယူမှုပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားက ၀.၅% ကောက်ပြီး၊ ဒေါ်လာ ၇၀၀ တန်တဲ့ ၀ ယ်လိုအားမှာထားလျှင် - သင်သည်ကော်မရှင်ဒေါ်လာ ၃.၅၀ ပေးရမည်။
ထိုအခါသင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရောင်းရန်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ရှိသောကော်မရှင်ကိုလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးအတိုင်းပြန်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏အမှာစာသည်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဖြစ်လျှင်သင်၏ ၀.၅% ကော်မရှင်သည်ဒေါ်လာ ၄ ဖြစ်သည်။
ဒီတော့တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးပြီဆိုရင်၊ ဘယ်နေရာမှာသုံးမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုပြီ။ အွန်လိုင်းအာကာသတွင်တက်ကြွစွာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းရာပေါင်းများစွာစာသားရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်ထားသောနံပါတ်သည်ကြီးပါသည်၊ အချို့သည် OK ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်းအတာများရှိသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အောက်ဖော်ပြပါသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းငါးခုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ သတိပြုပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်အလွန်အမင်းထိန်းညှိထားခြင်းခံရပြီးထောင်နှင့်ချီသောကုန်ပစ္စည်းတူရိယာများကိုထားရှိပြီးနေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုလက်ခံသည်။
အချုပ်အားဖြင့်နေ့ကုန်သွယ်မှုသည်အချို့သူများအတွက်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအားဖြင့်ကျနော်တို့ဆိုလိုတာကလေ့လာသူကုန်သည်အများစုကပထမကြိုးပမ်းမှုမှာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီနေရာမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့လက်နက်မရှိကြလို့ပါ။
ဒီလိုပြောခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးနေ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်ကသင့်အတွက်အခိုးအငွေ့ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးအလုပ်ကိုလက်ျာခြေထောက်ပေါ်မှဖယ်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရရှိပြီဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်းနေ့ရက်ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်ငါးခုကိုလည်းစာရင်းပြုစုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးသောအကြံပြုချက်များအားလုံးသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်ထားပြီးရောင်းဝယ်နိုင်သောကိရိယာများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ပေးကာသင့်အားငွေထုတ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာငွေသွင်းနိုင်သည်။
များသောအားဖြင့်နေ့ကုန်သည်များသည်နာရီပေါင်းများစွာပွင့်လင်းသောအနေအထားကိုထားရှိကြသည်။ အကယ်၍ ကုန်သည်သည် ဦး ရေပြားပေါက်နေပါက၎င်းတို့သည်မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကိန်းရှင်များစွာရှိသဖြင့်ဤအတွက်တ ဦး တည်းသောအရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီသောအဖြေမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်အကျိုးအမြတ်ကိုကုန်သည်၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ လောင်းကြေး၊
တစ်နေ့ကုန်သွယ်သောအခါ 'ပြန့်ပွား' ဘာလဲ?
ဟုတ်ကဲ့သင် CFDs များကို ၀ ယ်ပြီးရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားခြင်းများတွင်ဖြစ်စေ - အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်များကိုထိန်းညှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသောပွဲစားများအားလုံးသည် FCA (UK), CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် ASIC (Australiaစတြေးလျ) တို့ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများမှလိုင်စင်ချထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
သြဇာအကန့်အသတ်သည်အဓိကအချက်သုံးချက်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်တည်နေရာ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပွဲစားကဘာကိုကမ်းလှမ်းရန်ဆန္ဒရှိသနည်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်အခြေစိုက်ပါကအဓိကငွေကြေးအတွဲများ၌ ၃၀ ဆ၊ အရွယ်မရောက်သေးသောသူများနှင့်ထူးကဲသူများအတွက် ၂၀ ဆရှိသည်။ စကေး၏အောက်ခြေတွင်ကန့်သတ်ချက်မှာ ၂x သာရှိသော cryptocurrencies ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများသည်သင့်အားဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်ဘဏ်အကောင့်တို့ဖြင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။ အချို့သော platform များသည် Paypal ကဲ့သို့ e-wallets များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
တစ်ညတည်းငွေကြေးပေးရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပွဲစားမှသင်ချေးယူထားသောရန်ပုံငွေများအတွက်အဓိကအားဖြင့် 'အတိုး' ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘဏ္leာရေးအခကြေးငွေမကြာမီတိုးလာတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်သြဇာသက်တမ်းသည်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်သာသင့်လျော်သည်။